Papua New Guinea " Journey-Assist - mahaliana. Miantsena. Fifanakalozana fifanakalozana.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Oseania sy Australia » Papua New Guinea
Papua New Guinea. Fampahalalana ankapobeny
Papua New Guinea ho an'ny fizahan-tany
Papua New Guinea dia firenena any Oseania. Manodidina ny atsinanana ny jeografika. Nouvelle-Guinée, ny avaratry ny Nosy Solomon, ny Nosy Louisiada, ny nosin'i Bismarck ary nosy kely 200 hafa any amin'ny Oseana Pasifika, izany hoe any amin'ny faritra atsimo andrefany.
Ny nosy maro any Papua New Guinea dia voahodidina farihy, vatohara ary sambo midina miaraka amin'ny fiainana an-dranomasina tsy manam-paharoa. Eto ianao dia afaka mahita sambo izay nidina ambanin'ny rano na dia tamin'ny fotoan'ny fahitana lehibe ara-jeografika aza, ary koa nandritra ny fankahalana ny Ady Lehibe Faharoa.
Famonoana ratra any Papua
Inona no tokony hatao any Papua
Ny ampahany lehibe amin'ny faritany amin'ity firenena ity dia rakotra ala any anaty ala, izay mbola misy foko semi-liar ihany. Noho izany antony izany dia mahaliana ny mpizahatany ny Papua New Guinea. Betsaka koa ny tendrombohitra, volkano, vorontsiraka, riandrano, renirano ary ny lemaka amoron-tsiraka, ka mahatonga ny firenena ho tsara indrindra ny dia an-tongotra.
Na izany aza, ny fahalianana lehibe indrindra any Papua New Guinea dia ny tontolo ambanin'ny rano manodidina ny morony. Ny morontsiraka eto dia mahafinaritra amin'ny fialam-boly. Tao amin'ity firenena ity no niseho toy ny fisokafan'ny poppy.
Papua New Guinea dia mbola toeran-kaleha vaovao ho an'ny fizahan-tany. Mbola tanora ny indostrian'ny fizahantany eto amin'ity firenena ity. Na izany aza, misy lafin-javatra mahasarika mpizahatany vahiny. Kolontsaina miavaka, fety, tsena, surf, fisitrihana, jono, fitsangantsanganana, natiora miavaka io.
Ny fisitrihana sy ny snorkeling manaitra ao Papua
Toetany ao Papua New Guinea
Papua New Guinea dia manana toetr'andro tropikaly. Izy io dia aseho amin'ny haingo avo. Tsy miova ny toetrandro eto mandritra ny taona. Isotherm +26 isan'andro. Ny fizaran-taona dia tsy mitovy amin'ny orana fotsiny. Noho izany antony izany, tsy misy ny fahavaratra sy ny oram-panala efa mahazatra antsika, fa misy vanona sy maina. Fa amin'ny toerana samihafa eto amin'ny firenena dia miseho amin'ny volana maro ireo vanim-potoana ireo.
Tena mafana, misy antony hiantsoana faritra fotsiny amoron-tsiraka. Any amin'ny faritra be tendrombohitra, ny toetr'andro dia manana fahasamihafana lehibe amin'ny toetran'ny faritra iva. Mangatsiaka kokoa ny hafanana any an-tendrombohitra, be kokoa ny orana. Amin'ny haavon'ilay 2 500 m, ny isotherm dia +10 ary ambany. Saika eny an-tendrombohitra foana ny orana kely indrindra, indraindray ny havandra.
Loza any Papua New Guinea
Papua New Guinea dia firenena manana taha ambony amin'ny asan-jiolahy. Ny endrika mahazatra indrindra dia ny hosoka. Halatra ihany koa ny halatra fiara, halatra ary halatra an-dalambe. Tena avo ny kolikoly ataon'ny polisy. Any an-drenivohitra sy amin'ny tanàna hafa, miasa ny andian-jatovo, manao vonoan'olona, ​​fakana an-keriny, fandrobana, halatra ary fanaovana an-keriny.
Alohan'ny fitsidihana an'ity firenena ity, misy ny vaksiny miady amin'ny typhoid, malaria, cholera, hepatitis B, diphtheria, polio, tetanus ary Japone encephalitis. Tsara koa ny mahatsiaro fa ny fihanaky ny SIDA any Papua New Guinea dia mampidi-doza tokoa.
Mila mitandrina ianao amin'ny fanapahana sy fikapohana, satria na dia ny ratra kely tsy mampidi-doza amin'ny toetr'andro aza dia mety hiteraka olana lehibe.
Ny antsantsa mampidi-doza sy ny biby an-dranomasina misy poizina mipetraka any akaikin'ny nosy amin'ity firenena ity.
Vola, karatra, banky sy fifanakalozana fifanakalozana any Papua (PGK)
Ny vola nasionalin'ny Papua New Guinea dia antsoina hoe "kina". Ny kaody iraisam-pirenena dia PGK.
Banky any Papua New Guinea
1 havana dia mizara 100 toya. Ankehitriny dia misy bokotra misy anaram-boninahitra 2, 5, 10, 20 ary 50 sy vola madinika misy anaram-boninahitra 5, 10, 20, toyya ary 50 havana.
Vola ao Papua New Guinea
Bank any Papua
Ny ankamaroan'ny banky amin'ity firenena ity dia misokatra manomboka amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ka hatramin'ny 15 na 16 ora.
Ny fifanakalozana fifanakalozana dia azo atao amin'ny sampana banky, eny amin'ny seranam-piaramanidina, amin'ny hotely ary ireo toeram-pivarotana. Na eto amin'ity firenena ity aza misy mpanakalo fifanakalozana tsy miankina manana sisan-javatra somary kely kokoa ary tsy misy vidim-fifanakalozana, izay raisina amina andrim-panjakana hafa rehetra. Raha ny tokony ho izy manokana, ny haavon'ny banky dia hatramin'ny 1% n'ny fifanakalozana.
Fandoavana karatra any Papua New Guinea
Any amin'ny fivarotana metropolitan lehibe dia afaka mandoa amin'ny carte de crédit ianao. Miaraka amin'ny ATM, mampalahelo ny zava-misy. Ireo dia misy ao amin'ny Port Moresby misy azy ireo ihany, saingy na eto aza dia tsy mahazo mivoaka vola amin'ny karatra ianao raha tsy manana kaontinao manokana any amin'ny banky iray eo an-toerana. Any ivelan'ny renivohitra, tsy miasa mihitsy ny fandoavam-bola karatra. Noho izany, raha mitsidika an'i Papua New Guinea dia tsy maintsy manana vola ianao.
Ny hasiana mpandeha
Ny fizahana fitsangatsanganana dia arotsaka eto amin'ny sampana banky sasany eto an-drenivohitra sy ny tanàna hafa na lehibe kokoa. Saingy misy sampana vitsivitsy manome ity tolotra ity, vokatr'izany izay matetika ny laharam-be dia nofongarina matetika. Mba hisorohana ny vidiny fanampiny mifandraika amin'ny fihenan'ny tahan'ny fifanakalozana dia tokony handray ny fanamarinana toy izany ihany ny dolara amerikana, na dolara anglisy, na dolara Aostraliana. Ho an'ny banky dia ampandoavam-bola hatramin'ny $ 5 ny vaomiera rehefa mivoaka.
Eto amin'ity firenena ity, ny vola eo an-toerana ihany no ekena matetika. Eo ivelan'ny Port Moresby, matetika ny olana amin'ny tsy fisian'ny fiovana rehefa miantsena, dia zava-dehibe ny mitahiry vola amin'ny volavolan-dalàna sy ny vola madinika.
Dolara sy vola hafa ao Papua New Guinea
Fitateram-bahoaka any Papua New Guinea
Ny seranam-piaramanidina iraisampirenena eto amin'ity firenena ity dia 8 km miala an'i Port Moresby. Any Papua New Guinea, ny fiaramanidina no fomba fitaterana azo ampiharina indrindra, na eo aza ny vidiny lafo. Ny anton'izany dia ny ala tsy azo idirana ary tendrombohitra avo maningana ireo faritra sasany eto amin'ny nosy. Nouvelle-Guinée avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Azonao atao koa ny mividy passie de airline mandritra ny iray volana.
Ireo nosy dia mifamatotra amin'ny alàlan'ny fandefasana ny morontsiraka. Vitsy ny lalana vita. Tsy misy ny lalamby.
Fiantsenana any New Guinea
Eto amin'ity firenena ity dia misy magazay marobe manolotra vokatra tokana noforonin'ireo mpanao asa tanana any an-toerana. Ny entana tany am-boalohany dia azo amidy amin'ny barazy ihany koa. Tokony ho tsaroana fa, toy ny tsy fahita, ohatra, ny ankamaroan'ny firenena Aziatika, ny fanaovana tolotra dia tsy manao fanao any Papua New Guinea.
Ny ankamaroan'ny fivarotana dia misokatra 5 andro isan-kerinandro manomboka eo amin'ny 9 a.m. hatramin'ny 17 p.m. Ary andro fohy ny asabotsy. Ny fivarotana ihany no misokatra amin'ny alahady.
Inona ny hevitry ny fividianana ao Papua
Amin'ireo vokatra asa-tanana any an-toerana, mendrika ny hojerena ireo vokatra voasokitra sy voatenona, keramika, ary maodely fiadiana. Ny fivarotana lehibe indrindra ao amin'ny firenena, Boroko, dia miorina ao Port Moresby.
Sakafo ao Papua New Guinea
Isan'ireo lovia mahazatra ao Papua New Guinea no nindramina tamin'ny sakafo Malay, ary natsangana araka ny fomba fanao tany amin'ireo tany indizena tamin'ity firenena ity. Ao amin'ny fandrahoan-tsakafo an-toerana dia maro ny tanimbary eo an-toerana toy ny colocasia sy ny yams, voamadinika (voan'ny sago sy ny vary) ary ny hena (henan-kisoa, lalao ary akoho no malaza indrindra).
Legioma nohanina betsaka eto. Ny vokatra mahazatra dia ny mofo nendasina. Tian'ireo mponina any an-toerana ny manao salady tsy be pitsiny isan-karazany avy amin'izay akora ilaina eny an-tanana. Fangaro tena malaza amin'ny salady eo an-toerana ny abika (zavamaniry azo hanina eo an-toerana). Ny voanio sy voankazo eo an-toerana dia ampiasaina betsaka - manga, mananasy, akondro, voankazo mahaliana. Yam, vary, taro ary tapioca dia ampiasaina ho lovia.
Dessert any Papua
Ho fanampin'ny voankazo, ny lovia toy ny "dia" (akondro misy sago sy ny voanio), "kaukau" (savony voaendy), "saxac" (mofo sago), "talautu" (mananasy amin'ny ronono voanio) dia ampiasaina ho tsindrin-tsakafo. ), "Pit-pit" (tahon-kazo nandrahoina amin'ny ronono voanio misy voatabia sy sakamalao) ary mofomamy misy voankazo isan-karazany, izay antsoina fotsiny hoe "mofomamy" eto.
Ny zava-pisotro malaza dia misy kafe, voasarimakirana muli-wara eo an-toerana ary ranom-boankazo. Amidy na aiza na aiza koa ny alikaola. Ny ampahany lehibe amin'izany dia ny alikaola avy any ivelany.
Fifandraisana finday ao Papua
Tsy dia mivoatra ny fifandraisana an-telefaona any Papua New Guinea amin'izao fotoana izao. Misy mpandraharaha lehibe 2 eto amin'ity firenena ity - Pacific Mobile sy Telikom. Saingy ny faritra fandrakofana dia tsy misy afa-tsy ny atsinanan'ny firenena, misy ny tanànan'ny Mount Hagen, Lae, Alotau, Goroka, renivohitra Port Moresby ary ny nosin'i New Britain ary Bougainville. Any amin'ny faritra hafa, mbola lavitra ny fandrakofana. Any amin'ny faritra be tendrombohitra dia tsy misy mihitsy ny fifandraisana an-tariby.
Roaming dia tsy mety ho an'ireo mpandray anjara amin'ny finday rosiana avy any Papua New Guinea. Azo atao ny mividy karatra SIM amin'ny iray amin'ireo mpandraharaha ao an-toerana, miaraka amin'ny fanampiana ahafahana mifandray amin'ny Federasiona Rosiana amin'ny alàlan'ny tambajotra finday Aostraliana.
Avy hatrany aorinan'ny sidina amin'ny seranam-piaramanidina dia aroso ny hividy karatra SIM ao an-toerana. Ny antso any ivelany dia azo atao amin'ny foibe antso an-tariby na amin'ny mpandraharaha iray ao amin'ny hotely izay hipetrahanao.